Qalabka wax lagu karsado, Dubo-dubidda, Qalabka Jikada, Maacuunka, Alaabta miiska - Tuoda
Xeerka (EU) No. 10/2011 ee caagga ah
Dayrta! Saamaynta xaddidida awoodda ayaa muuqata!
Korontada raashinka ee dalka oo dhan ayaa nolosha ka dhigtay mid aad u liidata warshado badan oo wax soo saara.” Dahab sagaal qalin ah, ayaa had iyo jeer ahaa wax soo saarka amarada ganacsi ee ugu sarreeya. Waqtigaan lama filaan ah "korontadda raashinka", shaki kuma jiro dad badan oo aan diyaarsaneyn. ...
Saddexdii biloodba mar, badeecadaha naqshadaynta cusub ayaa...
5 qaybood oo caag ah oo cad...
10OZ caws sarreen ah oo aan la jeexin
Qamadi aan la jabin karin
Qamadiga Ledi Weyn ee S...
Lakab labanlaab ah Str Qamadi...
10 inch oo qamadi qoto dheer
Qadada 9 inch caws qamadi...
30 OZ Qamadi Qoto dheer...
24 OZ Ceerida Cawska Qamadiga...
Shirkadda NINGBO TUODA PLASTIC CO., LTD. waa shirkad xirfadle ah oo soo saarta oo dhoofisa badeecado caag ah oo tayadoodu aad u sarreyso, sida weelka wax lagu karsado, weelka dubista, maacuunta jikada, alaabta miiska, iyo alaabta guriga ee maalinlaha ah iwm.
Saddexdii biloodba mar, badeecadaha naqshadaynta cusub ayaa lagula talinayaa macaamiisheena si joogto ah. OEM & ODM sidoo kale waa la soo dhaweynayaa.